शाहरुखका छोरा आर्यन हुन् ‘विवादका राजा’ यसअघि उनि पहिले पनि केटी संग यस्तो अबस्थामा भेटिएका थिए ! – Kavrepati
Home / मनोरंजन / शाहरुखका छोरा आर्यन हुन् ‘विवादका राजा’ यसअघि उनि पहिले पनि केटी संग यस्तो अबस्थामा भेटिएका थिए !
admin3weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 178 Views
शाहरुख खानका छोरा आर्यन एक हाई प्रोफाइल पार्टीमा पक्राउ परेका छन्। पहिलो पटक होइन जब उनी विवादमा फसेका छन्। एनसीबी टोली को गोप्य सूचना को आधार मा मुम्बई बाट गोवा जाँदै गरेको ‘कॉर्डेलिया द इम्प्रेस’क्रूज मा जाँदै गरेको ड्रग्स पार्टी मा छापा मारेको थियो ।
एनसीबी टोलीको गोप्य सूचनाको आधारमा मुम्बईबाट गोवा जाँदै गरेको क्रुजमा जाँदै गरेको ड्रग्स पार्टीमा छापा मारेको थियो । यस पूरै पार्टीमा ६०० मानिसहरु सामेल थिए, जसमा एनसीबी का ३ केटीहरु सहित १३ जना लाई हिरासतमा राखिएको छ, र आर्यन खान को नाम पनि यी मानिसहरुमा सामेल छ, तब देखि एनसीबी उनीहरुसंग सोधपुछ गरिरहेको छ।
आर्यनको जन्म १३ नोभेम्बर १९९७ मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो जस अनुसार उनी अहिले २४ बर्षका छन्। जसरी शाहरुख खान लाई रोमान्स किंग भनिन्छ, उस्तै गरी आर्यन लाई विवाद को राजा भनिन्छ, किनकि उनको विवाद संग पुरानो सम्बन्ध छ।
यस अघि आर्यन खान एक नक्कली एमएमएस को विवाद मा थिए, यो एमएमएस सोशल मिडिया मा धेरै भाइरल भयो, जहाँ केटा कार मा केटी संग घनिष्ठ देखीयो। त्यसपछि यो भिडियो को बारे मा अनुमान लगाईयो कि यसमा देखिएको व्यक्ति आर्यन हो, तर पछि त्यो भिडियो नक्कली साबित भयो।
फिल्म निर्माण र निर्देशन मा आर्यन को रुचि को कारण, उनले दक्षिणी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय बाट फिल्म निर्माण र लेखन मा एक डिग्री प्राप्त गरे। मार्शल आर्ट मा प्रशिक्षित हुनुको अलावा, उनीसँग तेक्वान्दो मा ब्ल्याक बेल्ट छ। आर्यन खान उद्योग को सबैभन्दा प्रसिद्ध स्टार बच्चाहरु मा गणना गरिन्छ। हामीलाई बताउन दिनुहोस्, उनले लन्डनको एक प्रसिद्ध स्कूल सेभेन ओक्स बाट आफ्नो स्कूली शिक्षा पूरा गरेका छन्।
आर्यनले २०१० को महाराष्ट्र तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। यस बाहेक, उनले धेरै फिल्महरुमा एक बाल कलाकार को रूप मा काम गरेका छन, जस्तै कि उनको बुबा को भूमिका उनको फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ मा निभाईएको थियो। यो मात्र हैन, उनले केहि फिल्महरु को लागी भ्वाईस ओभर पनि गरेका छन, ती फिल्महरु को नाम २००४ फिल्म द इन्क्रेडिबल्स, २०१९ फिल्म द लायन किंग हो।
यसको लागी, उनले सर्वश्रेष्ठ डबिंग बाल आवाज कलाकार को लागी पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन्। किंग खानले आफ्नो छोरा आर्यन लाई अहिले सम्म लाइमलाइट बाट टाढा राखेका छन्, तर उनको लोकप्रियता ठूला स्टारहरु संग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ। आर्यन आईपीएलको १४ औं सिजनमा कोलकाता नाइट राइडर्सको लागि लिलामीमा देखिएका थिए। यति मात्र हैन, त्यस समय जूही चावलाकी छोरी जाह्नवी पनि त्यहाँ उपस्थित थिइन्, उही समयमा दुबै खेलाडीहरु को बारे मा चर्चा गर्दै देखिए।
Previous वडा अध्यक्षले गोप्य रुपमा यसरी उठएका थिए मृ तकको श व,परिवार ज्या न मा र्ने मान्छे खोज्दै (भिडियो हेर्नुस्)
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज २१ गते बिहीबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
इलामको चुलाचुलि गाउपालिका वडा नं ३ स्थित एउटा एकदमै अचम्मको भाइरल जोडि बस्छन् ।जहाँ ७०बर्षिय …